Sidee nolol loogu badbaadin karaa magaalo ay adagtahay in aad naftaada ku bad gasho? - BBC News Somali
Image caption 25 gaari oo ambalaas ah ayaa ka howl gasha guud ahaan magaalada Kaabuul
"Ma ogaan kartid qofkii saaxiibkaaga ahaa ee hadda ku jira cadowgaaga kula jooga magaalada Kaabuul, meeshan waxaa ka dhaca weerarro iyo qaraxyo badan oo aan la qiyaasi karin meel ay kugu helayaan", ayuu yidhi mid ka mid ah shaqaalaha oo magaciisa aan u qarinay sababo amni awgood.
Haweeney kale oo ka shaqeyasa gargaarka gurmadka degdegga ah ayaa tidhi: "Dadku marka ay subaxdi kasoo baxaan guryahooda, ma garanayaan in maqribki ay si nabad ah ugu laabanayaan".
Image caption Ambalaasta ayaa deg deg ku aadda meel kasta oo ay wac ka dhacaan
"Waxay ila tahay shaqadeennu waa sida inaan ku jirno ciidanka milatariga, isla sida ay askartu ugu cararaan furinta hore ayaan annaguna ugu cararnaa dadka u baahan gargaarka. Waxaan ku khasbannahay inaan la tacaalno amni darro badan oo ka jirta halkan, ciidamada amaanka ayaa si joogto ah u istaajiya ambalaasteenna si ay u baaraan", ayey tidhi.
Image caption Gaadiidka gurmadka ayaa baaritaanno isdaba joog ah lagu sameeyaa marka ay isbitaalka ula cararayaan dadka